Qiimaha Suuqgeynta Mawduuca | Martech Zone
Qiimaha Suuqgeynta Mawduuca
Khamiis, Juun 7, 2011 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Tani waa muuqaal gaar ah suuqgeynta waxyaabaha. Waxaan wadaagnay Shabakadda Mawduuca shalay, iyadoo laga wada hadlayo sida nooc kasta oo maadooyin ah looga faa'iidaysan karo istaraatiijiyad ahaan. Xogtani waxay ku baaqeysaa istiraatiijiyad xitaa sii xoog badan maxaa yeelay habdhaqanka akhristayaasha ayaa is beddelaya… oo noqonaya mid shaki badan oo dhaqaala badan.
Per ee Alinean Infographic: Ku guuleysiga dib u soo celinta maalgashiga suuqgeynta waxay u baahan tahay xeelado dheeri ah, daandaansi, iyo qiimeyn istiraatiijiyado iyo qalab si si guul leh loola dagaallamo Frugalnomics ™ - isku xirka, ka qeyb qaadashada iyo ka iibinta noocaan cusub ee iibsadaha.
Tags: alineyaanmiisaaniyadda suuqgeynta waxyaabahaistaraatiijiyada contentwaxyaabaha diirada la saaraydaandaansiku soo noqo maalgashigaqiimaha
Daawashada Kalandarka Mawduucaaga
Fortune 100 iyo Baraha Bulshada